'Ingelosi Iwile' yiNoir yeXesha lethu leTekhnoloji yeParanoia - Iimuvi
Eyona Iimuvi 'Ingelosi Iwile' yiNeo-Noir yeXesha lethu leParanoia yeTekhnoloji
'Ingelosi Iwile' yiNeo-Noir yeXesha lethu leParanoia yeTekhnoloji
UGerard Butler ungene Ingelosi Iwile .USimon Varsano
Ixesha lomngeni 30 isiqendu 4
Ummeli weNkonzo ka-Gerard Butler wase-US waseMfihlo uMike Banning ukwimo ekrakra ekuqaleni Ingelosi Iwile. Unesigxala esibuhlungu, isibini se-vertebrae ecinezelweyo, kunye netyala le-tinnitus elwa noPete Townsend's. Konke kukhokelele ekwandeni kokuxhomekeka kwizithomalalisi zeentlungu agcina imfihlo kumfazi wakhe (uPiper Perabo, ethatha uxanduva kuRadha Mitchell) kunye nomphathi wakhe, uMongameli waseMelika (uMorgan Freeman).
Kodwa njengoko udiniwe njengokuvalwa, ukuba uyakholelwa ukuba amanqaku e-Tomatometer kwizitofu ezimbini zangaphambili ze-saga esiyibiza ngokuba yi-Fallen Trilogy, usenza ngcono kunomgxeki wefilimu ekufuneka ehlole zonke zontathu. Uninzi lukhangeleka lukholelwa kukuba le mizekelo yento ekuthiwa kukuxhaphaza ubugrogrisi isaphila kwaye iyakhaba-ngokungafaniyo, yithi, nayiphi na iarhente yeNkonzo yaMfihlo enelishwa lokutsala noMike Banning.
BONA KWAKHO: Ukusebenza kukaCate Blanchett 'Uya phi, uBernadette' yeyona ntsebenzo yakhe ichaphazelekayo ukuza kuthi ga ngoku
Kodwa xa ususa Ingelosi Iwile Ukusuka kwimeko yeefilimu zangaphambili kwaye uthathele ingqalelo imeko kaMike ehlaselweyo kwaye uchitha ixesha elininzi kwifilimu etyholwa ngokungalunganga ngokuzama ukubulala umongameli, into onayo ngumnikazi wexesha lethu lobuchwephesha bobuchwephesha kunye nomkhosi wonke .
Njengefilimu yokuqala, Ingelosi ikubamba ngokuqinileyo kwaye ihlala ingekho ngqiqweni. Kwangoko, ikudambisa ngokuhlasela ngokudubula komzimba kunye nokubulala izithonga ngelixa ubeka uloyiko lwakho kumayelenqe ezomkhosi nakwimizi-mveliso kunye nobubi obungena kurhulumente kwelona nqanaba liphezulu. Luhambo oluchazayo oluyehlisayo, oluyinkathazo kwaye lwanelisa ngokumangazayo nolo luhlekisayo.
IINGELOSI ZIWILE ★★ 1/2
Yeluswa nguwe: URic Roman Waugh
Ibhalwe ngu: URobert Mark Kamen, Matt Cook kunye noRic Roman Waugh
Inkwenkwezi: UGerard Butler, uMorgan Freeman, uDanny Huston, uTim Blake Nelson, uPiper Perabo, uJada Pinkett Smith, uLance Reddick kunye noNick Nolte
Ixesha lokuqalisa: 121 imiz.
Ekhokelwa lixesha elinye elinamandla uRic Roman Waugh-naye ungumbhali-mbhali kwiskripthi- Ingelosi Iwile isibonisa ilizwe apho ubumlo kunye nokuma komkhosi kuye kwazisa yonke imiba kulungelelwaniso lwendalo kunye nentlalo.
Ilifu elibonakalayo lamalulwane atyhudisa ngaphezulu kwechibi apho umongameli eloba khona? Ngokwenene yingqokelela yeedrones ezincinci ezinokuthi zichonge ukuba ungubani ngaphambi kokuba zikuvuthele ukuba zibethe, njengoko kusenza kwi-Banning's 15-man security crew. Ukuma kwisikhululo segesi kujika kube kukubaleka kunye neelori ezizibize ngokuba ngamajoni kunye nemipu yohlobo lomkhosi kodwa abanalo nofifi lokuba bazisebenzisa njani.
Nditsho nokuphefumla kwi-off-the-grid West Virginia cabin eyikhaya likaBanning utata owahlukane notata Clay (edlalwa ngumdlalo owonwabisayo uNick Nolte) ityhila ubume bobabini bokubekwa kweliso kunye nobunzima beemfazwe. Ikwanentambo ngeziqhushumbisi ezaneleyo zokuwisa ilali encinci, okuthetha ukuba umhlaba apho indawo ebotshelelwe lihlathi inokuthenga intshabalalo ngokulula njengoko wayenokuthenga ubisi.
Xa iziqhushumbisi zikhutshelwa ezandleni zikaNolte owayebonakala ngathi uyaphepha, abaphulaphuli bahleka-into ebonisa ukuba yayenzelwe ukuba ibe yenye yeefilimu ezimbalwa zefilimu. Lo ngumdlalo bhanyabhanya othetha ngokutyibilikayo iziqhushumbisi kunamazwi.
Emehlweni ayo yonke iButler, ngubani owomeleleyo kwaye oqhelekileyo; ufana nenkwenkwezi yemuvi ongayichola kwivenkile enkulu yebhokisi ecaleni konikezelo lweetawuli zamaphepha iinyanga ezimbini. Ngokuyintloko, ulumkile ngokwaneleyo ukuba avumele isenzo simenzele uninzi lomsebenzi kuye. Ukubandakanywa kukaFreeman kwaye ngakumbi uNolte (kulihlazo ukuba abalinganiswa babo abaze bahlangane) kuyanceda ukuyibonisa umboniso bhanya-bhanya odiniweyo-wehlabathi kunye nomphefumlo ongaqhelekanga ukufezekisa ezi ntlobo zeemovie.
Ingelosi Iwile ayihlolisisi ingcamango yomntu ongalunganga ngokunzulu njengoko kufanelekile. Ngaphandle kokulandelwa lisebe ngalinye lomkhosi kunye nokunyanzeliswa komthetho, kukhokelwa yiarhente ye-FBI edlalwe nguJada Pinkett Smith ongqongqo, uBanning akaze asebenzise izakhono zakhe ezibulalayo ngokuchasene nabafo abalungileyo. Nangona kunjalo, uqhuba inqwelomoya ohamba ngenqwelomoya, akhokele amapolisa endawo kwimoto ebaleka ehlathini ebusuku, ukujika okuthandekayo kwesiqhelo yesantsya & nomsindo Uhlobo lwe-shenanigans-injected fuel.
Ngelixa Ingelosi Iwile Ngokuqinisekileyo yenye yezo bhanyabhanya enokukhetha ukuba ucime ingqondo yakho kwaye uyingenise kuyo, isanika nabani na ozimisele ukubandakanyeka nayo kakhulu ukuba acinge ngayo kwaye ayithathele ingqalelo.
Phantse iminyaka eli-18 sisemfazweni eAfghanistan ukuba oomongameli ababini kwiziphelo ezichaseneyo zobume bezopolitiko bathembise ukuba abayi kuphela. Ngendlela yayo ye-pulpy, Ingelosi Iwile ibonisa indleko zokubandakanyeka-ukusuka ekuqhubekeni kobugcisa bemikhosi yezomkhosi ukuya kwiindleko zobuqu ze-PTSD phakathi kwamagqala-ngendlela ethe tyaba ngakumbi kunamajelo eendaba anoxanduva lokugubungela oko.
Lihlabathi elitsha elingaqhelekanga kwaye liqala ukuthatha umthwalo kuthi sonke-hayi uMike Banning kuphela.
Izityebi zihlawula ngaphezulu kwesabelo sabo esilungileyo serhafu yengeniso yaseburhulumenteni
Phantse unyaka kwixesha lika-Obama, uAlexander ubonakalisa imingeni kamongameli
Imiboniso ephezulu kwi-apple tv
Umnumzana irobhothi ixesha lesi-2 isiqendu sesi-7 saphinda
omnye u-movie u-natalie portman movie
kala umtsalane wakho layisha ifoto